Nahoana No Nidongy Tsy Hanao Fifidianana Ny Mpanohitra Ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2014 19:53 GMT
Heniky ny afisin'ireo kandida manao fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ankapobeny fahafolo an'arivony hotontosaina ny 5 janoary 2014 i Dhaka. Saripikan'i Naveed Ishtiyak © Copyright Demotix (28 Dec 2013)
Raha manatontosa ny fifidianana ankapobeny i Bangladesh ny 5 Janoary 2014 dia efa matoky ny hanana ny atsasa-manila mihoatra sahady ny toerana [mg] ao amin'ny parlemanta ny antokon'ny mpitondra sy ireo mpiara-dia aminy. Vokatry ny ankivy ataon'ny mpanohitra tarihin'ny Bangladesh Nationalist Party (BNP na antoko nasionalista bengladesh).
Fanahoana moa no nidongy tsy handray anjara tamin'ny fifidianana ny antoko politika mihoatra ny 25?
Any amin'ny firenena efa matotra ny demokrasia, tsy miala amin'ny asany ireo izay mitondra mandritra ny fifidianana [fampielezan-kevitra] satria manaja ny lalàna ny rehetra. Saingy ao Bangladesh, efa fahazarana ny tsy matoky mpitondra politika ary efa heverina fa hihoa-pahefana izy ireo hangala-bato. Izany no mahatonga ny lalampanorenana Bangladeshi efa mametraka governemanta vonjimaika mpikarakara fifidianana hisahana ny fahefana mandritra ny fifidianana. Saingy, naka fanapahan-kevitra manokana tsy nierana tamin'iza na iza ny parlemanta tamin'ny 2011 hanafoana io rafitra io, ka mamela ny fanatontosana ny fifidianana ankapobeny eo ambany fahefan'ny mpanohana ny governemanta voafidy.
Nitaky ny isian'ny governemanta vonjimaika ny mpanohitra tarihin'ny BNP hikarakara ny fifidianana hatramin'ny nahalany ny fanitsiana ny lalam-panorenana laharana faha-15. Ny nataon'ny governemanta kosa dia ny nanolotra volavola hafa hametrahana governemanta vonjimaika andraisan'ny antoko rehetra anjara ary tarihin'ny praiminisitra amin'izao fotoana. Nitsipaka ny mpanohitra. Nanomboka hatreo,nihamaro ny fihetsiketseha-panoherana, ka tanatin'izany ny fitokonana faobe, ny fanaovana barazy, ny fikorontanana, ny diabe sns.
Dr. Badiul Alam Majumdar, tonian'ny Suhshashoner Jonney Nagorik (Sujon), fikambanan'ny mpamakafaka, nanazava nandritra ny tafatafa tamin'ny gazety Kaler Kantha [bn] ny antony nahatonga ny mpanohitra tsy hazoto hiditra amin'ny marimaritra iraisana:
Mieritreritra ny mpanohitra fa tsy handresy ry zareo amin'ny fifidianana rehefa tontosaina eo ambany fitondran'ny antokon'ny mpitondra izany. Rehefa governemanta vonjimaika tsy miandany ihany no mikarakara ny fifidianana vao handresy ry zareo. Tsy te-halala-tanana ry zareo, saria fantany fa raha milefitra ry zareo dia ho sarotra kokoa ny risika atrehiny. Ny risika dia ny faharesena amin'ny fifidianana. Tsy misy safidy intsony eo amin'ny politika Bangladesh hanaiky faharesena. Politikam-pahefana izany
Tamin'ny 25 Oktobra, tamin'ny andro nanambaran'ny vaomieran'ny fifidianana ny daty hanatontosana izany, dia nitsipaka avy hatrany ny mpanohitra tarihin'ny BNP sy ny Bangladesh Jamaat-e-Islami. Nanomboka ny fitokonana tsy misy fiafarany sy fanaovana barazy izay nampangozohozo ny firenena ry zareo.
Fihetsiketsehana mahery setra
Niteraka fihetsiketsehana mahery setra nitarika ho amin'ny fahafatesan'olona 111 [bn] tao anatin'ny iray volana monja ny fihetsiketsehana mitaky ny hanemorana ny fifidianana sy hananganana governemanta vonjimaika tsy miandany nataon'ny antoko mpanohitra.
Tatitra nataon'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Ain O Shalish Kendra (ASK) no nilaza fa niteraka fahafatesan'olona 507, ka nisy polisy ny 15 tamin'izany ary mpiandry sisintany ny roa, ny herisetra politika nitranga nandritra ny taona 2013, ary naharatrana olona hatramin'ny 22.407 (Jereo ny Tatitry ny Global Voices).
Nisioka tamin'ny mpitarika ny fanoherana i Partha Sarathi Dey:
Androany ny andro farany amin'ny taona. Miangavy farany aminao Madama, ialao ny lalan'ny herisetra… Ankoatra ireo mpikambana maherisetran'ny Jamaat-Shibir dia manirery ianao. Miangavy mba eritrereto ny fandrosoan'ny firenena.
Efa maro ny ezaky ny iraisampirenena hanelanelana ireo mpifanandrina. Efa nandefa taratasy na ho an'ny praiminisitra na ho an'ny mpitarika ny fanoherana mandrisika azy ireo hihaona sy hifampiraharaha ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana Ban Ki Moon. Efa nandefa iraka manokana ho any Bangladesh ihany koa izy. Maro ny masoivoho sy ny mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena no niezaka ny hanelanelana. Saingy nandamoka avokoa ny ezaka rehetra noho ny tsy fileferan'ireo mpitarika roa tonta. Izany no mahatonga ny firenena mandeha ao anatin'ny fifidianana tsy misy antoko mpanohitra amin'izao fotoana izao.